myanmar – The Voyager
ကလော၊ အောင်ပန်း၊ ပင်းတယ၊ အင်းလေး၊ တောင်ကြီး သွားမယ့်သူတွေအတွက် လိုအပ်မယ့် အချက်လေးတွေ
ကလော၊ အောင်ပန်း၊ ပင်းတယ၊ အင်းလေး၊ တောင်ကြီး ကို ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် အကုန်အကျသက်သက်သာသာ သွားလည်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် လိုအပ်မယ်ထင်တာလေးတွေ Sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ * အောက်မှာပြောပြပေးမယ့်အချက်အလက်တွေအားလုံးဟာ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီး ကိုယ်တိုင်သွား၊ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံတာတွေမို့ အခကြေးငွေယူပြီး ကြော်ငြာပေးခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ပါဘူးလို့ ကြိုပြောပါရစေရှင်။ ?? ❤️☺️ ~ Kalaw, Aungpan, Pindaya, Inle, Taunggyi – Review ~ ဘယ်နှရက်လိုမလဲ။ ?️ ကလော၊ အောင်ပန်း၊ ပင်းတယ ( ၂ရက်၊ ၃ည) အင်းလေး ( ၁ရက်၊ ၁ည) ဘယ်လိုသွားမလဲ။ ? ကလောကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်ကနေ တိုက်ရိုက်သွားလဲ ရသလို၊ မန်းလေးကနေ တစ်ဆင့်သွားလဲရပါတယ်။ ချောတို့ကတော့ ရန်ကုန်-မန်းလေး အသွားလက်မှတ်၊ တောင်ကြီး-ရန်ကုန် အပြန်လက်မှတ် […]
Transport tales in Myanmar
Sometimes, I think people forget the amount of money that can be saved while relying on public transportation instead of private van services or taxis. Asabackpacker, I’ve found that by using public transportation, I can save nearly 90% of my money, and it’s fun too. I can use this much saved money to […]
မန္တလေးကအထင်ကရနေရာတွေကို တစ်ရက်တည်းနဲ့ စုံအောင်လျှောက်လည်ကြည့်ခြင်း။ Mandalay – The last royal capital of Myanmar Mandalay is the second largest city and was the last royal capital of Myanmar. It’s also the economic center of Upper Myanmar and considered the center of Burmese Culture. Mandalay was founded by King Mindon in 1857. The city is famous for being as […]
တောင်ကြီးမီးပုံးပျံပွဲ ??❤️☺️ (English Below) ရှမ်းပြည်နယ်အလည်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ရာက ချစ်စရာရှမ်းဓလေ့၊ ဖော်ရွေပျူငှာလှတဲ့ တောင်ပေါ်သူတောင်ပေါ်သားတွေ၊ အရသာကောင်းလွန်းတဲ့ ရှမ်းအစားအစာတွေကို မမေ့နိုင် သတိတွေရနေဆဲပါ။ တောင်ကြီးမီးပုံးပျံပွဲကိုလည်း မထင်မှတ်ပဲ ကြုံကြိုက်ခဲ့သေးတာမို့ နေ့ဘက်အရုပ်မီးပုံပျံတွေ၊ ညဘက်မီးပုံးပျံကြီးတွေကို တအံ့တသြငေးမောကြည့်ခဲ့ရတဲ့ သိပ်ကိုလှပလွန်းတဲ့နေ့ညတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သွားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ အနွေးထည်လေးတွေယူသွားကြဖို့နဲ့ အနီးကပ်သွားမကြည့်ဘဲ ခပ်ခွာခွာကနေသာကြည့်ကြဖို့ မှာပါရစေရှင်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခြိမ့်ခြိမ့်သဲကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ တောင်ကြီးမီးပုံပျံပွဲကို အရောက်သွားရင်း ရှမ်းအိုးစည်သံတွေကြားမှာ မေ့မောကာ ရှမ်းရိုးရာ ဓလေ့တွေကိုချစ်မိသွားမှာ အမှန်ပါ။ Taunggyi balloon festival is happening now (26th October to 3rd November, 2017). (Taunggyi isacapital city of Shan State, Myanmar) I was […]